Mofon’aina – ALAROBIA 15 NOVAMBRA 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAROBIA 15 NOVAMBRA 2017
15 novambra 2017
9 Ry Ziona, izay mitondra teny soa mahafaly ô, miakara any an-tendrombohitra avo; Ry Jerosalema izay mitondra teny soa mahafaly ô, Asandrato mafy ny feonao, asandrato, fa aza matahotra; Lazao amin’ ny tanànan’ ny Joda hoe. Indro Andriamanitrareo!10 Indro, Jehovah Tompo ho avy amin’ ny heriny, ka ny sandriny ihany no hanapaka; indro, ny valim-pitia hatolony dia eny aminy, ary ny valin’ asa homeny dia eo anoloany.11 Hiandry ny ondriny tahaka ny mpiandry ondry Izy; Ny sandriny no hanangonany ny zanak’ ondry, ka hotrotroiny eo an-tratrany ireny, ary horoahiny miadana ny ampianahany.
ISAIA 40 :9-11
Hafatra miantefa manokana amin’ny fiangonana no hitantsika eto. Isika fiangonana ankehitriny mantsy no tondroina amin’ny hoe : Ziona na Jerosalema. Miandry ny fiavian’ny Tompo isika kanefa koa mamita iraka mandra-piaviny. Noho izany :
1-Torio hatrany ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy (and 9-10)
Ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy maty sy nitsangana tamin’ny maty ka nandresy ny fahafatesana io teny soa mahafaly tsy maintsy torina sy ambaran’ny fiangonana io .Esory ny tahotra fa efa nomen’ny Tompo antsika ny fahefana , ary efa nataony eo am-bavantsika fiangonana ny Teniny . Mitsangàna hitory izany vaovao mahafaly izany manerana ny Nosintsika. Ambarao ihany koa ny tsy maintsy hiaviany indray hitsara ny olona rehetra .
2-Lazao, ny maha-Mpiandry tsara Azy (and 11)
Asongadina eto ny maha- Mpiandry tsara an’ Andriamanitra. Tanteraka tao amin’i Jesoa tokoa izany (Jao 10). Tsy zava-mahatahotra ho an’ny mpino ny fiavian’ny Tompo indray. Andro hisehoany amin’ny maha- Mpiandry tsara Azy izany mba hanangonany antsika ondriny ho andiany iray eo ambany fiandrasany. Amin’izay dia hiainantsika amin’ny fahafenoany tokoa izay voalazan’ny Sal 23.
Ahoana no tokony hampiharan’ny fiangonana io and 9 io eo amin’ny fanaovana Tafika masina ?